Amin'izao tontolo izao nomerika ankehitriny, dia nahare momba ny tombontsoa amin'ny fananganana tranokala izahay, amin'ny famoronana fanatrehana an-tserasera ary hampiovazana ireo mpitsidika ny tranonkala ho mpanjifa mandoa.
Ny fanombohana tranonkala iray dia mampientam-po fa izany no fanombohana hampiroboroboana orinasa an-tserasera. Ny fanaovana antoka fa azo jerena ao amin'ny motera fikarohana izany ary hahatongavana eny an-tampon'ny valin'ny Google dia aiza no tena manomboka ny asa mafy.
Ity misy tantara haingana ho anao. Izy io dia momba ny tompona orinasa iray izay mametraka volana sy ezaka mandritra ny volana vaovao mamirapiratra mba hampiroboroboana ny serivisy sy ny vokatra. Na eo aza ny ezaka tsara indrindra sy ny fiezahana manentana ny fifamoivoizana dia mijanona eo ambanin'ny laharan'ny fikarohana ny tranokala ary tsy nahomby ny fampiasam-bola ho lasa fitomboan'ny varotra.
Feo mahay? Soa ihany fa tsy tokony ho toy izany. Miaraka amin'ny fampiasana SEO sy tranokala momba ny tranokala dia azo ovaina ny tranokala iray, ka ho tratran'ireo tampoka ambony eo amin'ny fikarohana antserasera.
Toy ny ankamaroan'ny zavatra eo amin'ny fiainana, ny fampiharana ny manam-pahaizana kely dia afaka mandeha lavitra rehefa misy SEO. Eritrereto ny fahasamihafana eo amin'ny fiasana amin'ny toeram-panatanjahantena irery na amin'ny mpanazatra manokana. Ny vokatra dia saika tsara kokoa foana, haingana kokoa ary maharitra kokoa rehefa miasa miaraka amin'ny mpanazatra. Ny fomba mitovy amin'izany dia azo ampiharina amin'ny famoronana fanatonana an-tserasera mahomby amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ny fanohanan'ny SEO sy ny manam-pahaizana momba ny marketing mba hanampiana ny orinasanao hitsangana amin'ny alàlan'ny fikarohana fikarohana.
Semalt dia naorin'ny ekipa manam-pahaizana toy izany ary nanampy ny mpanjifa erak'izao tontolo izao mba hanangana ny mombamomba an-tserasera nandritra ny folo taona mahery. Andao hojerentsika hoe iza izy ireo ary inona no ataony.
Amin'ny fomba fohy, Semalt dia Agence Digital feno-pahalalana miaraka amin'ny tanjona hahombiazan'ny orinasa an-tserasera. Miaraka amin'ny foibe any Kyiv, Ukraine, Semalt dia miara-miasa amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny SEO, ny fampandrosoana ny tranonkala ary ny serivisy fanadihadian-kevitra mandroso, ary koa ny famoronana fanazavana momba ny haino aman-jery.
Semalt dia ekipa iray misy teknolojia IT mahay sy matihanina amin'ny marketing - miampy ny turbo biby fiompy biby Turbo - miaraka amin'ny fakan-dry zareo amin'ny teknolojia nomerika. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa sy fizarana fahaizana manokana taona maro ny ekipa Semalt dia namorona vahaolana SEO tany am-boalohany mba hanampiana ireo mpanjifa hanatratra ny fatratra amin'ny toerana an-tserasera - ny tampon'ny valin'ny fikarohana Google.
Satria ho fantatry ny rehetra izay mampiasa internet, ny volamena eto an-tampon'ny fikarohana fikarohana dia volamena. Tsy vitan'ny hoe mampiakatra ny fahitana sy mampisondrotra ny fifamoivoizana an-tranonkala, fa ho an'ny orinasa an-tserasera, mety ho vokatr'izany ihany koa izy io dia mety hisarika ny mpanjifa mety hiteraka sy ny fitomboan'ny varotra.
Ka ahoana no mety ahavitany? Raha ny fantatra, misy safidy roa: AutoSEO sy FullSEO. Fa voalohany, ho an'ireo izay mbola tsy matoky ny dikan'ny SEO dia indro zotra faingam-pandeha kely ity.
Ny SEO dia mijoro ho an'ny Search Engine Optimization. Midika izany fa ny milina fikarohana toa an'i Google dia afaka mahita ny lahatsoratrao, bilaoginao, na tranokala eo amin'ny tontolon'ny votoaty an-tserasera feno fatratra sy mametraka azy ao anatin'ny valin'ny fikarohana azy ireo. Ny arisim-pankasitrahana bebe kokoa dia ny algorithm amin'ny motera fikarohana, avy eo ny avo kokoa amin'ny valiny dia hiseho.
Tsotra ilay izy fa ny milina fikarohana dia miova tsy tapaka ny algorithm, izay midika fa mety niasa tamin'ny taon-dasa tamin'ity taona ity. Misy lahatsoratra tsy hita isa hita eto amin'ny Internet miaraka amin'ny toro-hevitra momba ny fomba hahomby amin'ny SEO, fa ny iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra dia ny fampiasana teny fanalahidy mifandraika amin'ny tranokala iray. Avy eo, te-hieritreritra momba ireo takelaka meta ianao, manara-maso ny lohateny sy ny sary, manangana rohy ary mamorona votoaty tokana.
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia mitaky fotoana sy drafitra, ary ho an'ny tompona orinasa maro dia sarobidy ny fotoana (na indraindray misy vidiny tsy fahita firy). Eo no ahafahan'ny serivisy toa an'i AutoSEO sy FullSEO.
AutoSEO dia fitaovana natao ho an'ny orinasa madinika izay te hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokala saingy mety tsy dia mahalala ny SEO ary tsy te-hanao fampiasam-bola lehibe mandra-pahitany ny tena vokatra.
Ny serivisy dia manomboka amin'ny tatitra fohy momba ny toeran'ny tranokala iray ankehitriny, arahin'ny manam-pahaizana manokana momba ny SEO hahitana ireo lesoka ary hamantatra ny fanatsarana azo atao. Ny injeniera iray SEO avy eo no nifidy ny teny fanalahidy miteraka fifamoivoizana izay misy ifandraisany amin'ny tranokala sy ny orinasa asongadin'izy ireo. Manaraka, ny teknolojia Semalt dia manomboka manangana rohy mankany amin'ireo tranonkala mifandraika amin'ny niche, miaraka amin'ireo tranonkala voafantina arakaraka ny taonany sy ny Google Trust Rank.
Vantany vao napetraka ny fitaovana, Semalt dia manome vaovao farany isan'andro ny mpanjifa momba ny fomba fijerin'ny teny fanalahidy ary ny tatitra momba ny famakafakana mahazatra hanombatombana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra.
FullSEO dia manome vahaolana SEO mitambatra ho an'ny orinasa lehibe kokoa, olona manana orinasa maro, na ho an'ireo vonona ny handany vola kely kokoa amin'ny fikatsahana tranokala iray ary ampiasana SEO.
Ny serivisy FullSEO dia manaraka fitsipika mitovy amin'i AutoSEO, fa ny vahaolana natolotra dia mifototra amin'ny famakafakana lalina, ao anatin'izany ny fijerena ireo mpifaninana, ary manome antoka ny fivoaran'ny tranokala manan-danja miaraka amin'ny tahan'ny fiovam-po avo lenta. Mazava ho azy fa fitaovana handefasana tranonkala any an-tampon'ny valin'ny fikarohana Google - haingana.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana FullSEO, ny ekipa Semalt dia miantoka fa feno tranokala feno amin'ny fenitra SEO ny tranokala iray. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fanatsarana tranokala anatiny sy fanitsiana lesoka, toy ny famoronana meta tag ho an'ny teny fanalahidy, fanatsarana ny kaody HTML tranokala, fanesorana rohy tapaka sy fampitomboana ny fifandraisana an-tranonkala. Ny tombony hafa amin'ny fonosana FullSEO dia misy fanampiana feno avy amin'ny Semalt amin'ny fampivoarana tranonkala sy ny fananganana votoatin'ny SEO. Ny valiny dia fiverenana miverina amin'ny fampiasam-bola sy valiny maharitra.
Araka ny efa nahitanao azy izao izao, ny lakilen'ny tolotra SEO an'ny Semalt dia ny fampiasana analytics hamorona vahaolana tokana ho an'ny mpanjifa tsirairay. Na izany aza, ny teny hoe "analytana tranokala" dia mety hiteraka fisafotofotoana, koa aleo andeha hojerentsika ny dikan'io hoe inona sy ny fomba fampiasa ao amin'ny Semalt.
Ny analytics tranonkala dia fitaovana ampiasaina hanaraha-maso ny fahombiazan'ny marketing amin'ny Internet, ary koa ny fanaraha-maso ny toeran'ny tsenan'ny orinasa sy ny mpifaninana aminao.
Ny fanaraha-maso tsy tapaka dia ilaina amin'ny fahazoana ny sehatra feno amin'ny tsenan'ny orinasa. Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fametrahana teny fanalahidy manan-danja ho an'ny SEO sy hitazomana ny asa ataon'ireo mpifaninana, fa afaka mamantatra fotoana vaovao ihany koa amin'ny fampandrosoana ny marika amin'ny sehatra isam-paritra, na koa fomba vaovao amin'ny fizarana vokatra.
Ny fonosana Semalt dia manome fidirana amin'ny angon-drakitra an-tsoratra rehetra ilaina amin'ny fanaratoana ny fitomboan'ny tranokala ary ahafantarana ireo sakana mety hitranga. Ahitana ny fanavaozam-baovao laharam-pahamehana, tatitra an-tsokosoko ho an'ny fanehoana valiny sy angon-drakitra fidirana amin'ny alàlan'ny API Semalt. Mampidina ihany koa izy io fa manjary loharano mahasoa hanampy amin'ny fampahafantarana ireo paikady SEO. Ny fampiasana tranokala momba ny tranokala dia ampahany lehibe amin'ny piozila SEO ary, miaraka amin'ny fanampiana manampahaizana, dia azo ampiasaina izy io hamadika tranokala ho fitaovana mahomby mahomby.
Mpanjifa Semalt sambatra
Semalt dia niasa tamin'ny tranokala maherin'ny 5000 ary ny lisitr'ireo mpanjifa dia manerana an'izao tontolo izao izay misy orinasa manomboka amin'ny fahasalamana sy fahasalamana ka hatramin'ny teknolojia sy fananana. Mpanjifa faly maro no nanambara valiny tsara niaraka tamin'i Semalt nahazo valiny farany amin'ny Google sy Facebook.
Iray amin'ireo mpanjifa sambatra toy izany dia mpivarotra an-tserasera any Angletera manam-pahaizana manokana amin'ny vokatra tantely sy tantely. Ny tanjona dia ny hampiakarana ny orinasa eo amin'ny laharana Top-10 ao amin'ny Google ary hampiakatra ny fifamoivoizana organik amin'ny tranokala. Tao anatin'ny enim-bolana nampiasana ny serivisy FullSEO, nitombo 4,810 isan-jato ny fifamoivoizana, nitombo 12,411 ny fitsidihan'ny tranokala isam-bolana ary 12,1111 ny isan'ny teny fanalahidy ao amin'ny Google TOP-100 niakatra hatramin'ny 147 ka hatramin'ny 10,549. Naseho tao amin'ny boaty "People Also Ask" ihany koa ny mpanjifa, nanamafisana ny fifamoivoizana organik teo amin'ilay tranokala.
Ahoana no nanaovan'i Semalt an'izany? Ny vokatra dia vita tamin'ny alàlan'ny fanombohana ara-teknika lalina lalina mba hamantarana ireo faritra mila hatsaraina. Narahina paikady ny fanarahana famerenana ny tranokala, toy ny fiandrasana ny PageSpeed, ny famerenana indray ny tranokala sy ny famoronana votoaty SEO. Taorian'izay dia nanomboka nampiroborobo ny tranokala i Semalt ho ampahany amin'ny fonosana FullSEO amin'ny alàlan'ny fanentanana hananganana rohy mandroso. Ny ambiny, raha ny nambarany dia tantara.
Raha mila fanadihadiana bebe kokoa momba ny mpanjifan'ny Semalt sambatra, tsidiho ny tranokala eto.
Miara-miasa amin'ny Semalt
Izao fa nohazavaina ny SEO sy ny tranokala momba ny tranonkala, inona no atao amin'ny miara-miasa amin'ny Semalt?
Voalohany, Semalt dia orinasa manerantany ka tsy olana ny fitadiavana fiteny mahazatra. Ireo mpikambana ao amin'ny tarika dia miteny anglisy, frantsay, italiana ary Tiorka, ankoatry ny hafa.
Faharoa, mora manomboka amin'ny AutoSEO dia mora ny fitsarana andro 14 mandritra ny $ 0.99 fotsiny. Arahana izany ny safidy hisafidy drafitra hihazakazaka iray volana, telo volana, enim-bolana na iray taona. Izany dia fomba tsara hahazoana santionany ny serivisy alohan'ny hitsambikina ao amin'ny FullSEO.
Farany, Semalt dia manolotra ny fanohanan'ny mpanjifa 24/7, izay midika fa na aiza na aiza misy anao dia afaka miantso mpikambana amin'ny ekipa ianao raha mila fanampiana sy torohevitra. Azonao atao ihany aza ny mihaona amin'ny ekipa amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny pejy momba anay momba ny tranonkala.